Baxjo Cali: hooyo Itoobiyey ku xasanuunsantahay - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Baxjo Cali: hooyo Itoobiyey ku xasanuunsantahay
La daabacay tisdag 24 november 2015 kl 16.18
"jirkeyga Sweden qalbigeygana Afrika"
Baxjo Cali waxay ka mid tahay soomaalida badan reer Sweden ee xigtadooda dhow waddan kale ku nooshahay. Sawirle: Basho Cali. Qaas/privat
Baxjo Cali hooyadeed keligeed ayey caruur ka dhashay sida ay noosheegtay. Maanta hooyadeed waxay ku xanuunsantahay waddanka Itoobiya. "Qalbigeyga waxuu jira Afrika jirkeygana Sweden" ayey tiri.
Dadka xigtadooda dhow dalka dibaddiisa ku daryeela ayaa Sweden ah koox soo badanaysa balse aan muuqan.
Baxjo Cali iyo saygeeda waxay Iswiidhen yimaadeen 2011kii. Caruurta ay dhashay waxay uga so tagtay hooyadeed oo ay sheegtay in iyada iyo hooyadeed weligood isku guri ku noolaayeen.
Sannadkii 202ki markii maxkamadda sare ee socdaalka ogalaatay in qoysaska caruurtooda ka maqanyahiin laqa qaado DNA si loo hobiyo in ay dhalaleen loogana qafiifiyo sharuudda aqoonsi ee horey loogu xiray, markas ayey Baxjo carurteeda iyo hooyadeed u soo rartay Itoobiya una xaraysay dalab ah in ey dib ugu midoobaan Sweden. Laakiin caruurtii ayaa loo ogalaatay halka loo diiday hooyo in loo keeno maadame go'aanka DNA ayada qosaynin oo weli heyso sharuucda ah in ay keensato aqoonsi Sweden laga aqoonsanyahay.
Maanta Baxjo hooyadeed waa lixdan iyo dhwor sanno jir ku xanuunsanaysa dalka Itoobiya. Qof shaaqaale ah ayey u sameysay oo bil kasta lacag ku baxiso si ay hooyadeed u gacanqabato. Waxayna dareensantahay in xaaladeeda tahay labo daran mid dooro:
- Xoog ayaan uga welwelaa maalin kasta. Waxaan dareemayaa in aan ilmaheyga daraadood u soo dayacay hooyadey. Ilmahiina dib uma celin karo oo xaaladda meeshaan ka nimaanay weli waa sidii. Ilmahiina mustaqbalkii iyo nolashii aan halkan u nimid kamo baabi'in kari, hooyana kamo maqnaan karo.
- Waa arrin aad u adag oo qofka saameyn badan ku yeelanaysa. Nolasheyda saameyn ku yeelatay iyo tan ilmaheyga. Soomali badan dhibaatadan wey heystaa, ayey tiri.
Baxjo ayaa fahamsaneyn sharuudda aqoonsi ee lagu xiro dadka soomaalida ee doonaya in Sweden kula midoobaan qaraabadooda. "Dowladda Soomaliyana waan aqoonsanhay ayey leeyahiin haddana basabooradeeda ma aqonsanin" ayey tiri Baxjo. Waxayna ugu baaqday dowladda Sweden in ay il naxariis leh ku eegto dadka badan ee qaraabada ka maqan tahay.
Xigto dhow dibadda ma kaa joogtaa?
måndag 23 november 2015 kl 13.19
måndag 23 november 2015 kl 12.01
måndag 23 november 2015 kl 12.45
måndag 23 november 2015 kl 08.16